Ụbọchị My Pet » Ọ Online dịwara a Good Nhọrọ Gị?
Ọ Online dịwara a Good Nhọrọ Gị?
emelitere ikpeazụ: Jul. 08 2020 | 3 min agụ
Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị emewo ngwa ngwa na-nọmba onye oke maka kpọrọ izute ndị na ka ụbọchị. The online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụlọ ọrụ e na-eto eto na ewu ewu na ezi ihe mere. Ọ bụrụ na ị na-nsu banyere ma ịnwale online akpa dị ka ụzọ ahụ romance, Tụlee ihe ise a mma mere na-eji ihe online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ nwere ike ịbụ ezi nhọrọ maka gị.
1. Ukwuu Nhọrọ
A otu tinye n'ọrụ ihe online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ nwere a mma nke nwere ọkụ karịa otu eji ọzọ omenala mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụzọ dị ka obodo mmanya ma ọ bụ ụlọ ahịa kọfị. Na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ị na-ekwe na-agagharị na site na ọtụtụ profaịlụ achọ ahụ pụrụ iche na mmadụ. Mgbe ị na-isi nkuku ụlọ ahịa kọfị na ị na-enwe ohere nzute a njuaka otu ndị, na mgbe ụfọdụ mgbe izute onye ọ bụla mgbe nile. Na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ị mụbaa n'ụzọ dị ukwuu gị Ohere nke ịchọta onye na-akpali.
2. Inweta ihe ị chọrọ
Ọtụtụ online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ ekwe ka ị chọọ site profaịlụ dabeere na ụfọdụ isi kwuo okwu ma ọ bụ site a nzacha usoro. Site achọ naanị site profaịlụ nwere okwu “Christian” ma ọ bụ “egwuregwu na-akwado” na ha, na ị nwere ụba ohere na ịchọta onye na-amasị gị na echiche na ọdịmma na tutu amama ndị na-enweghị. Mgbe ị na-izute nwoke ma ọ bụ nwaanyị na a mmanya, unu enweghị ụzọ na-agwa nri kwụsịrị ụsụ ma ọ bụrụ na ha bụ ndị Kraịst ma ọ bụ ekweghị na Chineke, a San Diego chaja si ofufe ma ọ bụ ọ bụrụ na ha na-eche na football bụ a-eme ihe ike egwuregwu. Site na iji search ọrụ ma na nzacha na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ iji mata profaịlụ nke nwere ọkụ, ị nwere ike iwepụ ihe ndị bụ oge na-achọ ebe profaịlụ nke ndị mmadụ na-adịghị ịkọrọ gị ọdịmma.
3. Personal Ama nwere ike ịnọ n'onwe
A oké ihe banyere online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ ya anonymity. Mgbe wetere na kọntaktị na onye ị na e dọtara online, ị na-adịghị na-enye ọ bụla onye informationÖnot ọbụna gị adreesị email gị. Ị nwere ike na-ewe oge n'ezie na-esi mara a tupu enye ozi gbasara dị ka nọmba ekwentị gị, n'adịghị ka ndị ọzọ iche-iche nzute ndị. Ọ bụrụ na i zute onye na na a kpọrọ ntụpọ, na ị na-amanye inye pụọ nọmba ekwentị gị iji na-na kọntaktị, ọbụna ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ zutere onye na amaghị ezu banyere ya ma ọ bụ ya mara ma ọ bụrụ na ha nwere ezi ihe n'obi.
4. Egwu na ihere nwere ike belata
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi kpọtụrụ onye ezie email Ị nwere ike na-oge n'ezie atụmatụ ihe ị chọrọ ikwu na onye na-online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ọ bụrụ na ị hụ onye gafee ụlọ ma na-agbalị gakwuru ha, mgbe ụfọdụ akwara na ihere nwere ike nweta ihe kasị mma nke ị. Ị nwere ike zubere ihe ị na-aga ikwu, ma mgbe ị na-agakwuru ya niile Nwela mgbagwoju anya na-abịa unu n'ọnụ pụta. Na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, i nwere ike na-anọdụ ala na-eche banyere gị email, na-agụ ya ihe karịrị otu di na nwunye ugboro, na-ezite ya maara na i kwuputela onwe gị ndị kasị mma nke gị ike. Ndị na-elekọta adịghị eru ha ala nke nwere ike na-abịa na-eru nso onye na ada na onye na-fọrọ nke nta tutu amama.
5. Ọ bụ a One na Otu Ahụmahụ
Mgbe a mmanya, osisi, ụlọ ahịa kọfị, ma ọ bụ ndị ọzọ na omenala kpọrọ nzukọ ebe, ọ fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume na-eme ka a onye njikọ na onye ị na mmasị. E nwere n'ọrụ mpi maka ntị ná ndị a nnọkọ ntụrụndụ na a otu na otu na mmekọrịta pụrụ ịbụ nnọọ ike na-abịa site. Na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọ bụ onye nri site na mmalite. Ị na-ekwurịta okwu otu na otu na a onwe email mkparịta ụka na onye i nwere mmasị na na-enwe ike na-etolite a onye njikọ nri kwụsịrị ụsụ, kama sọọ mpi na juru otu ụlọ ndị ọzọ otu ụmụ okorobịa na gals niile maka otu ihe mgbaru ọsọ.
N'ihi na kpọrọ nri na omenala mkpakọrịta nwoke na nwaanyị idaha, na-achọ mgbanwe, online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịbụ ụzọ na-aga. Ị nwere ike izute ihe ndị yiri ọdịmma na-enweghị na-ekere òkè onye ozi na, mgbe ị na-ahụ zuru okè profaịlụ, i nwere ike na-etolite ihe ozugbo onye njikọ. Ọ bụ N'ezie uru a na-agbalị.
Olee otú Bịakwute A Nwanyi Online - Site A nwaanyị Ele
Aghaghị Nkịta : New Leash On Life